Wadahadalka Koonfurta Sudan - BBC Somali
Wadahadalka Koonfurta Sudan
23 Febraayo 2015
Image caption Dagaalka ayaa barakiciyay malaayiin qof.
Madaxa guddiga dhexdhexaadinta Seyoum Mesfin ayaa weydiiyay labada dhinac in ay soo gabagabeeyaan arrimaha ku saabsan sida awooda loo qeyb sanaayo dowladda kumeel gaarka ah ee la dhisi doono kahor 9 ka bisha luulyo.
Haddii la ansixiyo heshiiska, Madaxweyne Kiir, ayaa sii ahaan doono madaxa dowladda halka Dr Machar uu la wareegi doono xilka madaxweyne ku xigeen koobaad.
Balse labada hoggaamiye ayaan wali isku waafaqin awoodda uu yeelan doono madaxweyne ku xigeenka ee maamulka cusub ee lasoo dhisi doono.
Sidoo kalana waxa ay wadaagi doonaan fursadaha xilalka xukuumada.
Midowga yurub iyo dowladda Shiinaha ayaa labaduba ka digeen dib u dhac ku yimaada wadahadalka oo sii xumayn kara xaaladdaha adag ee ka taaagan Koonfurta Sudan.
Ergaga midowga yurub ayaa sidoo kale ugu baaqay midowga Afrika in ay soo saaraan warbixinta gudiga dabagalka ee loo saaray in uu baaritaan ku sameeyo dambiyadii foosha xumaa ee la galay xiligii rabshaduhu socdeen.
In ka badan hal milyan iyo bar oo dad shacab ah ayaa laga barakiciyay guryahooda tan iyo markii dagaaladu ka bilowdeen South Sudn bishii December ee sandkii 2014kii.